Khabiir Caqli-gal ah: Ka-qaadista Spam-gudbinta Gudbinta Warbixinta Google Analytics
Mararka qaar Google Analytics waxaa laga yaabaa inay sawirtaan gaadiidka gudbinta qariidada ah ee goobta ah iyada oo aan loo baahnayn dhiirrigelin gaar ah ama maaddo heer sare ah. Way ku adag tahay in la sharraxo sida tani dhacday iyo sababta ay u dhacday. Si aad u hesho macluumaadka saxda ah, mid waa inuu ka takhalusaa spam u gudbinta si joogto ah.
Lisa Mitchell, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semef , wuxuu sharxayaa sida loo xalliyo dhibaatada ka imaanaysa spamka aan la rabin iyo kuwa aan la rabin.
Spam gudbinta waxay dhacdaa marka websaydhku helo farriin taraafi ah oo ka imanaya barnaamijyada spam ama barnaamijyada. Macluumaadka waxaa lagu soo bandhigaa warbixinnada akoonka Google Analytics kaas oo xogta ku jira halkaas oo ay soo saartay arrimaha arrimaha soo gudbinta. Way fududahay in la arko oo laga yaabo inay haystaan ​​ilo laga helo adduunka oo idil. Waqtiyada kale, waxay heleysaa qulqulaad badan, laakiin gaadiidka gudbinta oo leh boqolkiiba 100% soo noqoshada waxay u badan tahay inuu yahay spam gudbinta.
Haddii mid aan weli hubin, oo leh barnaamij nadaafadeed oo wanaagsan, waxay booqan karaan goobta si ay u eegaan haddii gaadiidku leeyahay wax saameyn ah. Farsamada loo isticmaalo baaritaannada gudbinta waa websaydka soo noqnoqaya codsiyada URLs gudbinta ee boggaga bartilmaameedka. Spam Ghost waa tan heleysa uma baahnid spamer si ay u soo booqdaan goobta ay doonayaan inay bartilmaameedsadaan.
Dhigista Spam Referral
Dadka qaarkood waxay ku andacoodaan in mid ka mid ah laga saari karo spam gudbinta. Macluumaadku maaha mid sax ah, waana muhiim in mid ka mid ah uu iska ilaaliyo isticmaalka liisaska gudbinta ee laga helay Google Analytics. Sababta ayaa ah in loo isticmaalo in laga reebo taraafikada kaararka iibka saddexaad. Waxay ka hortagtaa macaamiisha in ay tiriyaan sida gaadiidka haddii ay ku soo noqdaan si ay uga baxaan goobta. Google Analytics wuxuu isku dayayaa inuu ku xiro soo booqdayaasha soo laabanaya ilo hore, ama dhexdhexaad ah, markaa laga reebo iyada oo qayb ka ah gaadiidka gudbinta. Marka, marka laga reebo gudbintaas, gaadiidka xariifka xun wuxuu u gudbin doonaa dhexdhexaad / ilo kale, sidaas awgeedna wuxuu ku sii wadi karaa falanqaynta.
Ka qaadista Spam jidka
Liiska ka-saarisku maaha habka ugu wanaagsan ee lagu xalliyo arrimaha la xidhiidha spam. Nidaamkuna wuxuu faddareynayaa, laakiin kama saarin taraafikada. Sidaa darteed, baabuurta ka socota aragtid kasta waa in la sifeeyaa iyada oo la adeegsanayo xulashada ka-reebitaanka gudbinta. Hababka soo socda ayaa kaa caawin kara sidaan:
1. Abuuri foom cusub oo lagu magacaabo "Referrer Spam" oo ah heerka aragtida
2. U dooro nooca ikhtiyaarka ah "caadada"
3. Xulashada goobta, dooro "ololaha ololaha"
4. Falanqaynta xayeysiinta sheyga waa in ay ku jirtaa domainka gudbinta spam sida soo socota
Habkani wuxuu ka tirtirayaa taraafikada gaarka ah ee aragtiyahan. Waa muhiim in dadka isticmaala ay koobi ka dhigaan faylka qoraalka ah ee isticmaalka mustaqbalka. Qaar ka mid ah hababka ugu wanaagsan waxaa ka mid ah samaynta bogga internetka si ay u eegaan muujinta joogtada ah, hubinayaan inay eegaan ikhtiyaarka loogu talagalay shaandheeynta boodhyada la yaqaan iyo caarada. Filimadu waxay qaadataa 24 saacadood oo laga bilaabo hirgelinta si ay wax uga qabato.
Abaabul Qeyb gaar ah
Qeybaha gaarka ah waxay kaa caawiyaan in ay macluumaadka spam ka dhigaan warbixinnada Google Analytic. Waxay yihiin kuwo aan la saadaalin Karin taas oo ah sababta ay dadka isticmaala u waafaqsan yihiin kuwa soo socda:
1. Furan aragtida warbixinta GA iyo Qeybinta Kusaabsan, dooro Xulo Cusub (No Spam), ka dibna xaaladaha Heerarka
2. Muuji "fadhiyada" iyo "ka saar" doorashooyinka loo adeegsan karo shaandhaynta
3. Dooro "isku-dhafka" iyo "source source"
4. Ku dhaji ereyga joogtada ah ee hore loo kaydiyey
Taas ka dib, ka dibna ka badbaadi kadibna codso. Waxay ka tirtirtaa dhamaanba bogagga qaan sheegadka warbixinnada ka soo baxaya xog nadiif ah.
Gaadiidka gudbinta waxaa loo baahan yahay in si joogta ah loola socdo si loo hubiyo in dhammaan xogta galka uusan ka muuqanin warbixinnada GA. Muuqaalka sawirkan ayaa ah in marka mid ka mid ah bogga kaliya ee spam, boqolaal, haddii aan kumanaan kale, kor u kicin. Macnaheedu waa in nadiifinta aasaasiga ah ee aan la isticmaali doonin muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, haddii qofku qaato farsamo, ama farsamo aan ahayn farsamo, waxaa suurtagal ah in laga takhaluso spam u gudbinta xogta Google Analytics.
Spam u gudbinta ayaa soo bandhigaysa falanqeyn aan fiicnayn oo keena warbixino been ah. Warbixinnadu waxay ubaahan yahiin matalaad sax ah ee xogta iyo heerka taraafikada. Xogta dhajinta leh looma tiirsanaan karo si loo muujiyo waxa ka shaqeeya oo aan u sameynin bogga internetka Source .